Nzipụta na ụgwọ ọrụ site na mmetụta | Martech Zone
Tuzdee, Machị 27, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ekelere enyi anyị, Akara Schaefer, onye gbara ajụjụ ọnụ na nso nso a na CBS banyere akwụkwọ ọhụụ ya, Laghaghachi na Mmetụta: Ike Mgbanwe nke Klout, Nlekọta mmekọrịta mmadụ na ahịa. Anyị na Mark Schaefer gbara ajụjụ ọnụ izu ole na ole gara aga na redio anyị.
Otu n'ime igodo gbara ajụjụ ọnụ ahụ m masịrị n'ezie bụ agbamume Mark na elekọta mmadụ media na-enye onye ọ bụla ohere iji nweta ọhụhụ ma nweta ụgwọ ọrụ dabere na mmetụta ha. Nke ahụ bụ ihe anyị na - akuziri ndị mmadụ kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara n'okwu gbasara isiokwu ma ọ bụ ọkachamara n'ọhịa a kapịrị ọnụ, ma ọ bụ na ị nwere ngwaahịa pụrụ iche, web ahụ na-enye ikpo okwu nke nwere ohere na-enweghị ngwụcha iji nyere gị aka ịkwalite ngwaahịa ma ọ bụ nka ahụ ma kwụghachi gị ụgwọ maka ya.
Tags: CBSAjụjụ ọnụAkara SchaeferLaghachi na Mmetụta